Lalao 6 sy fampiharana maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra (22 Janoary) | Vaovao IPhone
Lalao sy fampiharana 6 maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra (22 Janoary)
Raha vao avy niarina teo am-pandriana ianao ary te hanararaotra ny alahady, saingy tsy misy fiezahana kely dia anio no hitondrako anao ny fomba tsara indrindra hanaovana izany: famerenana lalao sy fampiharana sasany izay, na dia karamaina matetika ary mitaky anay manoritsoritra ny paosintsika, maimaim-poana ho an'ny rehetra izy ireo anio. Aza adino ny fotoana hijerena azy ireo satria azo antoka fa ho tianao ny sasany amin'izy ireo, ary farafaharatsiny afaka miteny amin'ny namanao ianao fa nanararaotra ny alahady maraina tamina zavatra tsara 😂.
Fa satria tiako ny mahatadidy sy mampitandrina foana, aza adino fa ny tolotra rehetra, ny fampiroboroboana ary ny fihenam-bidy rehetra dia Fotoana voafetra. Fantatray fa amin'izao fotoana izao amin'ny famoahana ity lahatsoratra ity izy ireo, saingy tsy fantatray hoe rahoviana izy ireo no halaina satria ny mpamorona saika tsy manao an'io ampahibemaso velively. Ka na inona na inona fisalasalanao momba ny tianao na tsia ny iray amin'ireo fampiharana na lalao ireo dia misintona aloha dia mieritrereta avy eo, maimaim-poana izany ary tsy handoa vola anao izany. Faingana hahazoana izay mahaliana anao indrindra. Aza avela handositra izy ireo !!
2 Rap studio
3 Wonderoom HD Pro - Mpanonta sary sy sary, endritsoratra, sivana & endriny
4 Block vs Block II - NetBattle
5 Musica - Ad Free Music for Soundcloud MP3 Play.er
6 Photo Transfer 3.0
Lumiè dia fampiharana fakana sary ahafahanao mampihatra Bokeh na mampihena ny vokatr'ireo sarinao. Izy io dia mifanaraka amin'ny iPhone, iPad ary iPod Touch avy amin'ny iOS 8 ary misy endri-javatra maro hafa hahatonga ny sarinao tsy manam-paharoa: manitatra, mampihena, mihodina, sns. Effets 121 ho an'ny sarinao.
Lumiè Izy io dia manana vidiny 1,99 euro mahazatra, izao, azonao atao maimaim-poana tanteraka izany.
Rap Studio dia «Ny fomba tsy mampino indrindra hamokarana rakikira rap». Izy io dia manana mixer feno, be dia be ny effets ary azo atao ny manondrana amin'ny alàlan'ny iMessage, YouTube, Facebook, mailaka ...
Rap studio Izy io dia manana vidiny 2,99 euro mahazatra, izao, azonao atao maimaim-poana tanteraka izany.
Wonderoom HD Pro - Mpanonta sary sy sary, endritsoratra, sivana & endriny
Wonderoom HD Pro Is a mpamoaka sary feno miaraka amina interface madio sy tsotra. Azonao atao ny manafatra sary avy amin'ny Instagram sy Flickr ary "ampanjifaina ny sarinao amin'ny sivana, effets, frame ary fonosana tsara tarehy."
Ho fanampin'izay, mamonjy ho azy ny fivoarana ataonao amin'ny fizotry ny fanovana ankehitriny ianao mba hahafahanao miverina haingana amin'ny kinova taloha, na manohy eo amin'ny toerana nijanonanao farany.
Manampia sivana maivana, sivana vignette, karazany dimy manjavozavo, miasa amin'ny tonony sy ny lokon'ny sary amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny famirapiratana, ny fifanoherana, ny mahavoky ary ny fiasa maro hafa.
Wonderoom HD Pro Izy io dia manana vidiny mahazatra 6,99 euro, na izany aza, na dia tsy maimaim-poana aza dia izao dia azonao atao amin'ny 0,99 Euros fotsiny, ka aza hadino izany.
Wonderoom HD Pro€ 7,99
Tonga ny fotoana hanehoana lalao aminao, izany no atao amin'ny Alahady. Tadidinao ve ilay Tetris malaza? Ka tsy ilaina ny manazava hoe inona ity lalao ity, efa fantatsika rehetra izany. Ny zavatra tsara indrindra dia izao afaka miatrika mpifanandrina ianao, raha mbola eo ambanin'ny tambajotra WiFi iray ihany ianao. Sahy ve ianao?
Block vs Block II - NetBattle Izy io dia manana vidiny 5,99 euro mahazatra, izao, azonao atao maimaim-poana tanteraka izany.
Bloka vs Block IImaimaim-poana
Musica - Ad Free Music for Soundcloud MP3 Play.er
Amin'ny «Mozika» no hanananao fidirana feno sy tsy misy doka amin'ny SoundCloud, amin'ny alàlan'ny interface madio kokoa, tsotra ary tsotra kokoa
Henoy izay hira, rakikira na fandraisam-peo azo alaina ao amin'ny Soundcloud maimaim-poana na tsy doka.
Musica - Ad Free Music for Soundcloud MP3 Play.er Izy io dia manana vidiny 6,99 euro mahazatra, izao, azonao atao maimaim-poana tanteraka izany.
Con Photo Transfer 3.0 ianao dia afaka "hamindra, backup ary zarao ny horonan-tsarinao sy ny sarinao (ao anatin'izany ny sary mivantana) manokana, haingana ary amin'ny vahaolana feno.
Safidy lehibe hanafahana toerana amin'ny iPhone na iPad anao io; Azonao atao ny mamindra sary sy horonan-tsary any amin'ny Mac, Dropbox, Google Drive ary Flickr, alefaso amin'ny alàlan'ny mailaka, amin'ny alàlan'ny iMessages na "amin'ny alàlan'ny fandikana URL fohy fotsiny hizarana azy io araka ny fotoana tianao."
Photo Transfer 3.0 Izy io dia manana vidiny 2,99 euro mahazatra, izao, azonao atao maimaim-poana tanteraka izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao sy fampiharana 6 maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra (22 Janoary)
LifeProof dia mandefa ny NUUD vaovao ho an'ny iPhone 7 sy 7 Plus